QULQULKU WUXUU ORDAA: XAWAARAHA CELCELISKA IYO XAWAARAHA UGU SAREEYA EE KHATARTA - BEERAHA DIGAAGA
Xawadee ayuu ku dhacaa ostrichka marka uu ordo
Dunida shimbiraha, dhirta ayaa ah kuwa kaliya ee mulkiilayaasha culus ee lugaha murqaha dheer iyo baaluqo laba-mitir oo liidata. Waxay marnaba u kacaan samada oo ay ka cararaan hanjabaadaha. Maxay tahay xawaaraha ugu sareeya ee uu ku kici karo shimbiraha aan duulista lahayn, ka sii bartaan maqaalkan.
Maxaa go'aaminaya xawaaraha
Maaddaama ay lugaha xoogga leh iyo qarada weyn leh, duurjoogta ayaa ka gudbi kara masaafo weyn waqti gaaban. Boogahooda ayaa lagu gartaa muruqyada si fiican u horumarsan, waxay bixiyaan dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, iyo laba farood oo ku yaal caanaha kasta. Haddii aad eegto shimbirta cagaha si faahfaahsan, waxaad arki kartaa in aysan jirin ciddida geedi socodka gaaban ee aan qarsooneyn. Oo farta labaadna waxaa ku yaal cagaha awoodda badan.
Ma taqaanaa? Lugaha duur-joogta waa hubka dilaaga. Marka la barbardhigo: laadkii feerka waxaa lagu qiyaasaa 20 kg halkii kiilomitir oo laba jibbaar ah, laadkii dhuxusha waa 30 kg! Xooggan noocan oo kale ah ayaa si fudud u garaacaya baraf bir ah oo dhumuc dhererkeedu yahay 1.5 sentimitir wuxuuna lumiyaa lafaha dadka..
Duleedku waa muhiim, sababtoo ah:
wuxuu xakameynayaa xawaaraha shimbiraha inta uu socdo iyo socodka;
waa kaalmo marka shimbirta difaaceeda isu difaacdo inta ay is difaaceyso;
waxay ka caawisaa inay ku riixdo tallaabo iyo maneuver ku saabsan socodka iyada oo aan la yareeyn xawaaraha.
Dhakhaatiirta casriga ah, siyaasiinta iyo habdhaqanku waxay aaminsan yihiin in dhammaan xayawaanka la midka ah ay leeyihiin hal awoowiin oo ay la jireen dinosaurs muddada Mesozoic. Waa shimbir dabiici ah oo hadda laga bilaabo nidaamka lithorates, oo ku noolaa 55 milyan oo sano ka hor.
Soo ogow haddii ay suurtogal tahay in lagu gawraco dharka guriga. Sidoo kale waxaad ogaan kartaa meesha qulqulka iyo dhagaxa ameraha ee Maraykanka ku nool yihiin iyo waxa ay cunaan.
Weli waxaa laga helaa Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Sidaa awgeed, diiqadadu waxay asal ahaan yeesheen awoodda ay u duulaan. Sidan waxay ku faafayaan dhammaan qaaradaha adduunka. Fikirkan waxaa xaqiijiyay cilmi-baaris hidda-socodka. Si kastaba ha ahaatee, shimbiraha duulista leh waxay u baahnaayeen ballanqaad ballaaran oo loogu talagalay in la qaato, taas oo ahayd mid ku habboon weerarrada ka hortagga. Taasi waa sababta culeyska culus ee cufku uu doorbidayay duulimaad, halkii uu ka duuli lahaa.
Ma taqaanaa? Dhaqankooda dabiiciga ah, duufaanku waxay tixgeliyaan jinniyo iyo jajab si ay u noqdaan cadaawayaashooda ugu xun, kuwaas oo burburiya hudheelada shimbiraha. Kaliya chicks waxay la kulmaan libaaxyo, kabaro iyo shandado kale, maadaama aanay ka gudbi karin dadka waaweyn..
Natiijo ahaan, jiilal cusub oo shimbiro waaweyn ah ayaa bilaabay inay yeeshaan lugaha muruqyada adag, baalashooda ayaa istaagay si ay u fuliyaan ujeeddadoodii hore. Sidaa daraadeed, musqulaha hore ee shimbirta waxay noqdeen qalab fudud oo lagu xakameynayo xawaaraha, maaddaama culeyska weyn loo qaybiyey lugaha.
Qalabka lafdhabarashada waxaa lagu gartaa saansaan iyo xasilooni. Kooxahaani waxay ku socon karaan boqolaal kilomitir, iyaga oo isticmaalaya khayraadkooda tamar si firfircoon. Hal talaabo, waxay ku dhaqaaqaan 4 mitir horay u soo qaadaan.
Iyada oo ay sabab u tahay unugyada murqaha leh ee lugaha ku leh lugaha, dhaqdhaqaaqyadooda ayaa ah mid barbar socda, iftiin iyo jilicsan. Oo marka shimbirta dardar-geliso, waxay u egtahay in ay dhaqso u socoto lugaha, sababtoo ah jirkeeda ma uusan leexin, sida caadiga ah ee wade kasta.
Xaaladaha ba'an, duufaantu waxay ku socon karaan xawaare ilaa 70 kiiloomitir saacaddii, taas oo aan ku samayn karin naas-nuujin afar lugood leh. Marka la barbardhigo: Isboortiga ciriiriga ah inta lagu jiro tartanka orodka 30 kiiloomitir oo isku mid ah.
Ma taqaanaa? Duurjoogta, dhirta waxaa lagu gartaa heerka badbaadada khatarta ah. Laga soo bilaabo inta badan kiisaska ay ka soo baxaan guulaha, maxaa yeelay, ka soo cararaya ka ilaalinta, gumaadkaas, iyagoo gacan ka helaya baalasha, waxay si wayn u beddeli kartaa jihada socodka iyada oo aan la yareeyn xawaaraha. Ka dib markii wax laga qabanayo dhibanaha suuragal ah, masiibo daal leh ayaa u baahan waqti ay dib u bilaabaan ceyrsiga.
Aan fiirino sida ugu dhakhsaha badan ee kooxahan aan duulista lahayn ay u socon karaan oo ay ordi karaan.
In jawi degan, xayawaannada baaluqa ee xawaaraha qiyaas ahaan 20-30 kiiloomitir saacaddii, iyo marka ay ordaan, waxay xawaareysaa ilaa 50 kiiloomitir. Sida laga soo xigtay khubarada, tani waxay suurtogal u tahay sifooyinka dabiiciga ee gaarka ah ee hindisaha iyo foosha ee shimbir wayn.
Waa muhiim! Beer beerta oo dharbaaxo leh waa in ay noqotaa feejignaan. Ka dib oo dhan, baali, inkasta oo ay xasuustaan ​​sii waarayaashooda, waxay si aad ah uga falceliyaan dhaqdhaqaaqyada degdega ah. Taasina waa sababta ay dad badani ay isku dayayaan inay ka ilaaliyaan gardarrada aan loo baahneyn ee shimbiraha by bogeymen hore, kuwaas oo ku xiran naftooda. Waxa ugu muhiimsan waa in dhererka qaab dhismeedkan uu ka badan yahay sare ee shimbiraha. Kadibna, hagaya mabda'a "qofka dheer, taas oo ka muhiimsan," xayawaanku si xushmad leh ayuu uula dhaqmayaa xitaa gacanta kor loo qaaday ee milkiilaha.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, dadka zoologistu waxay si taxadar leh u siiyeen qaabdhismeedka nidaamka murqaha dareenka. Hawlgalkooda ugu muhiimsani waa muujinta dabeecadda ostrichada marka la barbar dhigo jirka bini'aadamka. Waxaa la rumeysan yahay in sidan oo kale, saynisyahannadu waxay awood u yeelan doonaan inay ogaadaan awood dheeri ah oo loogu talagalay cayaaraha runta ah.
Haddii ay dhacdo khatar
Marka gogol-xannibaadku uu bilaabo inuu ka baxsado duufaanka duurjoogta ah ee qulqulka, shimbirta ayaa ku socota xawaaraha 70-75 km / saac. Tan macnaheedu waxa weeye in mid kasta oo labaad uu ka badan yahay 20 mitir. Waxay caan ku tahay in socodka dhererka tallaalka qulqulka oo kordhay 7 m.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad ogaatid sida ay faa'iido u leedahay iyo sida loo cuno ukunta duurjoogta iyo sida loo isticmaalo dufanku.
Cilmi-baarayaashu waxay ku andacoodaan in shimbirahaasi aaney gaar ahaan cabsi jirin Kiloometeri waxay ogaan karaan khatarta iman karta iyo ka fogaan kartaa waqtigaas. Intaa waxaa dheer, duurjoogta, inkastoo ay suurtagal tahay awoodooda, ma jecla inay weerarto kuwa gardarada ah, sidaas darteed, ka cararaya khatarta, waxay door bidaan in ay dhakhso u kaco.
Dunida ayaa diiwaangelisay rikoodhka markii uu culeyskiisu ahaa mid culus oo culus oo soconayey xawaare 92 km / h. Isla mar ahaanteed, awooddooda tamarta waxay ku filnayd meel fog. Dabeecadda ayaa ka xannibtay duurjoogta fursadda ay ku koraan cirku, siinta cilladahan by lugaha xoog leh. Maanta, shimbirahan ayaa mar dambe loo duulay si ay u noqdaan ciidan xoog ah, laakiin waxaa la siiyay kaliya hilibka, ukunta, iyo hoos.
Waa muhiim! Qabqabashada, duufaantu waxay muujinaysaa tilmaam wanaagsan oo wax soo saar leh, oo ku xiran mawduuca wareega sanadka ee cimilada mideysan..
Sidaa darteed, kobcinta awoodaha shimbiraha ma saameyn karaan wax soo saarkooda. Dhacdooyinkooda waa daneyn kaliya oo ku saabsan jilayaasha xiisaha leh.